Ederede Ohad Samet na Martech Zone |
Edemede site na Ohad Samet
Ohad Samet bu onye nchoputa na onye isi nke EziAccord, nke mbụ ụdị algorithmic mgbake ikpo okwu. EziAccord na-eji mmụta igwe, nyocha akparamagwa yana usoro mmadụ iji nyere ụlọ ọrụ na obere azụmaahịa aka nwetaghachi ụgwọ dị egwu ma jigide mmekọrịta ndị ahịa dị mma.
Azụmahịa ndị metụtara azụmahịa bụ eziokwu nke ndụ maka ọtụtụ azụmaahịa, n'ihi ụgwọ a na-akwụghachi, ụgwọ a na-akwụghị ụgwọ, mgbanwe, ma ọ bụ ngwaahịa a na-akwụghachighị azụ. N'adịghị ka ụlọ ọrụ ịgbazinye ego nke ga-anakwere nnukwu pasent nke ọghọm dịka akụkụ nke usoro azụmaahịa ha, ọtụtụ mmalite na-emeso mfu azụmahịa dị ka nsogbu nke anaghị achọ nnukwu nlebara anya. Nke a nwere ike ibute spikes na nfu n'ihi akparamàgwà ndị ahịa anaghị achịkwa, yana nkwụghachi ụgwọ nke ọghọm nke enwere ike ibelata ole na ole.